Harphool Nivas 2 @Hauz Khas Village - I-Airbnb
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Rahul
U-Rahul Ungumbungazi ovelele
Leli yifulethi elisha eliyigugu le-2 Bedroom elisendaweni enokuthula eduze kwetshe lesikhumbuzo lase-Hauz Khas nechibi. Leli fulethi elisezingeni lesibili linamakamelo okulala amabili anamagumbi okugeza anamathiselwe, igumbi lokuhlala, ikhishi elisebenza ngokugcwele kanye ne-balcony. Ifulethi lifakwe kahle ngefenisha yamagugu futhi i-balcony inikeza ukubukwa okumangalisayo kwenqaba yekhulu le-13 kanye nechibi.
Lesi sakhiwo siqanjwe ngoHarphool Singh, omunye wokhokho babasunguli beHauz Khas Village.
Ifulethi linamakamelo okulala ama-2, amagumbi okugeza ama-2, igumbi lokuhlala kanye nekhishi. Ifulethi linompheme omkhulu (enefenisha yangaphandle) ebheke inqaba nechibi - indawo enhle yokuzipholela ngebhodlela lewayini.
Ifulethi lifakwe ifenisha yakudala ekhethwe ngesandla. Imibhede iza nomatilasi onethezeke kakhulu nemicamelo enelineni elisezingeni eliphezulu.
Ifulethi linekhishi eligcwele lonke elinendawo yokupheka, ihhavini ye-microwave, i-toaster, igedlela likagesi, isiqandisi esigcwele usayizi, i-cutlery negilosa yokudla okuyisisekelo.
Ifulethi liza ne-wifi yamahhala kanye ne-LCD TV ekamelweni ngalinye.
4.87 · 95 okushiwo abanye
I-Hauz Khas Village (HKV), ezungezwe amapaki, amahlathi namachibi nhlangothi zonke iyindawo yezamasiko neyokudla yaseDelhi enenqwaba yegalari yobuciko, izindawo zokudlela zabaklami kanye nezindawo zokudlela eziwina imiklomelo endaweni.
Ngingajabula ukukunikeza lonke usizo ukuze wenze ukuhlala kwakho kunethezeke, ngikunikeze ulwazi ngezindawo ezinhle ongazivakashela, izindawo ezinhle zokudlela kanye nezindawo ezinhle ze-hangout.
URahul Ungumbungazi ovelele